चुरोटको लत लागेको छ ? अलैंचीले छुटाइदिन्छ ! – ramechhapkhabar.com
चुरोटको लत लागेको छ ? अलैंचीले छुटाइदिन्छ !
अलैंचीमा भएको पोषक तत्त्व र औषधीय गुणले स्वास्थ्यका सही राख्न मद्दत गर्छ । अनि यसले चुरोटको लत पनि हटाइदिन्छ । अलैंचीमा पोषक तत्त्वका साथै अल्फा टेरपिन, लाइमोनीन, माइकेनिन र मेंथोफोन जस्ता गुण हुन्छन् ।
यस्तालाई दिनमा चारपटक चपाउँदा पनि चुरोटको तलतल घट्छ अनि निकोटिन नपाइँदा हुने छटपटी र चिन्ताबाट पनि आराम दिन्छ । राति राम्रो निद्रा आउने र दिमागलाई शान्ति दिने काम पनि गर्छ । लगातार सात हप्तासम्म सूप र अलैंची एकसाथ खाँदा निकोटिनको लत नियन्त्रणमा आउँछ । अनि पाचन दुरुस्त भएर पेटको समस्या पनि घट्छ ।
यसबाहेक अमला, सूप र अलैंचीलाई बराबर मात्रामा चूर्ण बनाउनुस् । अनि चुरोट वा बिडी पिउन मन हुँदा यस मिश्रणको एक चम्चा खानुस् । यसलाई बिस्तारै चपाईचपाई खानुस् । यसले लत पनि छुटाउँछ अनि पेट पनि सफा गर्छ ।
काठमाडौं – बिस्तारै जाडोयाम सु्रु हुँदैछ । जाडो याममा बिहान चिसो छ भनेर अल्छि मानेर बस्ने बानी पनि हुन्छ । जाडोयाममा शारीरिक अभ्यास गर्न अल्छी मानेर बस्दा शरीरमा कोलेस्ट्रोल बढ्ने खतरा रहने स्वास्थ्य विज्ञ बताउँछन् । जाडो याममा घाम कम लाग्ने कारण शरीरले भिटामिन डी कम मात्रामा सोस्न पाउँछ ।
मोटोपनबाट समस्याग्रस्त र मधुमेहको समस्या भएका व्यक्तिमा ८० प्रतिशतसम्म कलेजो सम्बन्धी रोग लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ । डा. सन्जय सिंहले भने ‘कलेजोले शरीरमा रहेको विषाक्त तत्वलाई हटाउने काम गर्छ । चिसोमा अल्कोहल पिउनु राम्रो मानिँदैन् । जाडोमा लसुन खाँदा यसले शरीरमा रहेको विषाक्त तत्वलाई हटाउँछ ।